Ny toerana sy ny fomba hihaona ny olona ho an'ny lehibe sy ny fifandraisana. ⇒ Bilaogy Yaroslav Samoilov
Ny toerana sy ny fomba hihaona ny olona ho an’ny lehibe sy ny fifandraisana. ⇒ Bilaogy Yaroslav Samoilov
Izay mba hihaona ny olona ho an’ny lehibe sy ny fifandraisana. Hoy ny sasany antontan’isa, amin’ny teny portioge ny mahazatra toerana ny lehilahy latsaky ny vehivavy. Araka ny tsaho, mendrika rehetra ny olona sombin, ny hafa nolazainy fa mpanenjika vehivavy, ary ny hafa ho lasa gay.»Mendrika ny olona ho lehibe fifandraisana sarotra ny hihaona»hoy saika isaky ny ankizivavy voalohany -tamin’ny taonjato voalohany. Ary ianao mahalala, marina ny anao. Raha toa ka ny fivoriana ny olona amin’ny alina clubs, trano fisakafoanana, na ny tsy handao ny trano ny fikasana hihaona amin’ny ara-dalàna ny olona iray dia nihena ho ny-tevan’ny unreality. Izany tsy midika fa izao tontolo izao tantara tsy fantatra iray raharaha club sy ny fianakaviana koa ho any amin’ny farany. Aho miresaka momba ny mety ho. Manomboka avy amin’ny an-jatony maro fanehoan-kevitra sy ny mailaka aho fa handray dia afaka miteny hoe, inona ny vehivavy mitomany matetika kokoa. Ny olona dia tsy misy ny fanajana ny vehivavy. Izy dia miezaka, ary izy no tsy mankasitraka, mihevitra afa-tsy ny tenany, dia tsy mampiseho ny faniriana hanatsara ny fifandraisana. Noho izany ny famaranana (milaza ny marina): ny tena toetra izay no toerana ho an ny olona ny fisokafana amin’ny tena fampandrosoana, ny fanoloran-tena.
Ny lehilahy iray dia tokony hahitana ny marina tanjona eo amin’ny fiainana, ary ny vehivavy, ny lehilahy iray miaraka amin’ny tanjona tsara (C) milaza ny Aterineto. Ny olona toy izany toetra ny vehivavy hendry»jamba»sample ny mahery fo. Tsy hendry hivadika ho infantile, na ny olona nandositra izy ireo, mialoha ny tsikariny ny fofon’ny nendasina. Ary inona ny vehivavy, noho ny lalana. Rehefa nanatrika ny zava-mitranga hatreto, eo amin’ny fiainako, izay ny ankamaroan’ny olona vita fanoloran-tena. Olona efa nahita fahombiazana teo amin’ny ara-nofo anefa, ny olona teny an-dalana. Afa-tsy noho ny kisendrasendra, dia ho afaka hihaona dikany ny olona toy izany toerana. Eto, ny lehilahy mpanatrika dia Matotra kokoa sy lehibe kokoa. Ny tena manokana sy amin’ny fomba feno ny namana. Tsy fitiavana izany. Avy eo dia mandeha maka misy, fara fahakeliny, indray mandeha. Raha toa ianao ka mbola fiaramanidina avy ny firenena, tsy fantatro, inona no karazana rivo-piainana ao seranam-piaramanidina. Ny olona ao amin’ny santionany kely sisa, dia nisy fiovana ny toerana manodidina. Izany foana no mahaliana ny olom-pantatra. Ankoatra izany, ny mpihaino voasivana: sahaza ny olona eo ho eo amin’ny vola miditra sy ny ambony. Ratsy ny toe-tsaina mba virtoaly Mampiaraka. Ary noho ny antony tsara. Moa ve ianao manana namana ny mpivady izay nihaona an-tserasera, ary dia faly miara. Tsy lavitra ny mikatsaka: ny zandriny lahy mipetraka amin’ny zazavavy iray fa efa ho roa taona maro miaraka. Ny fanontaniana mipetraka dia tsy ny fomba hitsena ny ara-dalàna ny olona ao amin’ny Aterineto na miantso azy ireo dime am-polony. Afaka miaina sy tsapaka miantso ny isa sy sasany ny sevens, ohatra. Fanontaniana: moa ve fantatrao ny fomba manavaka ny ara-dalàna avy ny adalanao sy hitandrina ny lehilahy iray. Misy, toy ny eo amin’ny fiainana, dia mila mahatakatra ny fitsipika sasany ny lalao. Mendrika ny lehilahy amin’ny Mampiaraka toerana loatra. Ny fanantenan-dry zareo ny fianjerana amin’ny vato ny mitovy karazana vavy mombamomba, dia izay mino fa ny hatsaran-tarehy sy ny fahafahana posvit ny fanalahidin ny fahombiazana fifandraisana amin’ny lehilahy matanjaka. Tsotra loatra Eto aho, dia hanoratra izany: raha toa ianao izay taona nanenjika izany tanjona izany, sy ny fahombiazana ny rehetra misy, na dia, fa ny zavatra tsy add up angamba ianao tokony hanova ny fikasany. Rehefa dinihina tokoa, dia ny fotoana ela ny tanjona dia mety ho manan-karena. Fa amin’ny Ankapobeny, mba hijery ny manan-karena mila mandany fotoana misimisy kokoa ny tontolo iainana: ry clubs, trano fisakafoanana, antoko tsy miankina. Fa mbola fahazoan-dalana hidirana ny manaraka ny torohevitra ao amin’ny andininy teo aloha, satria mety tena tanjona napetraky (ray aman-dreny, ny fiaraha-monina, ny sarimihetsika, ny tontolo iainana) ary noho izany dia mampino amin’ny olana lehibe tratrarina (ary TSY be loatra ny ny zava-misy fa ny fahasambarana ANY). Tsia, izany tsy midika fa ny vehivavy tokan-tena dia tokony mbola mihazakazaka any amin’ny toerana izay lehibe lehilahy amin’ny bulging maso tamin’ny fikarohana iray. Mafy izahay fahazoan-dalana hamaky ny lahatsoratra ny Fomba hisarihana ny olona iray. fa bebe kokoa ny fahazahoany ilay raharaha momba ny Fiarahana. Amoron-dalana, ny namana, izay fifandraisana mirindra amin’ny olona matotra nandritra ny taona maro, hoe tsy misy intsony ny mitantara ny namany ny toro-hevitra momba ny psikolojia ny fifandraisana folo heny, ary ny manome fotsiny ny rohy ao amin’ny bilaogiko.
Ny hevitra manan-danja ho an’ny ankehitriny: hahatakatra ny ZAVATRA tsy mila lehilahy sy ny TOERANA ireo dia saika miangona. Miezaka ny mandany fotoana any (mazava ho azy, fa ianao no maika). Ary afaka hitsena AZY eny amin’ny fiantsonan’ny lamasinina, ny fiara fitateram-bahoaka, ary na dia ao amin’ny iray lavalava club. Ny zava-dehibe indrindra dia ny tsiky. Mitete an-tsaina, hanana maha-vehivavy azy, mifanaraka amin’ny. Dia hahomby ianao. Ary dia hanohy ny fanampiany. Feno fankasitrahana noho ny fanehoan-kevitra rehetra sy ny fanontaniana (indrisy, tsy manam-potoana foana ny valiny. Fa ny famakiana avy ianareo rehetra). Virtoaly manaiky. Ao Goa nilaza tamiko: namihina ny andro, ary ny olona lasa falifaly kokoa.
Mahafinaritra amin'ny lehibe ny olona: ahoana no faly hanambady vahiny. mahita ny →